VaMugabe Vanosangana naVaTsvangirai
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pamwe nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vasangana muHarare neMuvhuro vakakurukura mafambiro ari kuita zvinhu muhurumende yemubatanidzwa.
Kunyange hazvo pasina kujekeswa kuti zvii zvataurwa nevaviri ava, zvimwe zvezvinhu zvanga zvakatarisirwa kukurukurwa nezvazvo, inyaya yekudomwa kwevatongi vematare edzimhosva kwakaitwa naVaMugabe vasina kusuma VaTsvangirai, sezvinodiwa nechibvumirano chakashandiswa mukuvaka hurumende yemubatanidzwa.
Svondo rapera VaTsvangirai vakanyorera VaMugabe tsamba vachinyunyuta nedanho iri, vakati vaida kuti vasangane vari vaviri pavanodzoka kubva kurwendo rwavo rweku South Korea neChina.
Imwe nyaya yanga yakatarisirwa kukurukurwa nezvayo ndeyekusagadzwa semutewedzeri wegurukota rezvekurima kwemubati wehomwe muMDC, VaRoy Bennett, avo vakachenurwa nematare edzimhosva pamhosva yavaipomerwa yekuda kupidigura VaMugabe kubva pachigaro.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva zvabuda mumusangano wevaviri ava. Asi mutauriri waVaTsvangirai, VaJames Maridadi, vatenda kuti vatungamiri ava vasangana, asi havana kuda kutaura zvakurukurwa.
Ukuwo, vakuru vanonyarikana, kana kuti The Elders, avo vanga vachisangana muSouth Africa, vanoti vari kushushikana zvikuru nekunonoka kupera kuri kuita nhaurirano dzemuZimbabwe, uye kusazadziswa kwezviri muchibvumirano cheGlobal Political Agreement.
Chikwata cheThe Elders china Archbishop Desmond Tutu, vaimbova mutungamiri weAmerica, VaJimmy Carter, Amai Graca Machel, vaimbove munyori mukuru weUnited Nations, VaKofi Annan, vaimbove mutungamiri weSouth Africa, VaNelson Mandela nevamwe.
Archbishop Tutu vanoti vanoda kuti nhaurirano dzichimbidzofamba kuitira kupedza kutambura kwemhuri yeZimbabwe.
VaCarter vanotiwo vose vari kushushikana nezviri kuitika muZimbabwe, vachiti kana muZimbabwe muchizoitwa sarudzo, zvinhu zvinofanirwa kutanga zvagadzikana, kuitira kuti sarudzo idzi dzisave nemhirizhonga.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, Professor John Makumbe, vaudza Studio7 kuti hapana chinofamba kubva mune zvose zviri kuchemerwa nevanhu, sezvo VaMugabe nebato ravo reZanu PF, vakaisa zvimiti munzeve.